Semalt Expert: Python sy BeautifulSoup. Ataovy mora foana ny toerana
ny antontan-kevitra ilaina ary hamita ny tetikasanao. Ny fiteny programming Python dia manana fitaovana sy fitaovana mahery vaika azo ampiasaina ho an'ity tanjona ity. Azonao atao, ohatra, ny modely tsara tarehy ho an'ny famakiana HTML.
Hijery an'i BeautifulSoup eto izahay ary hijery hoe maninona no ampiasaina be izao ny tranonkala .
Ireo tarehy BeautifulSoup
- Manome fomba isan-karazany amin'ny fitetezana mora, mikaroka sy fanovana amin'ny hazo parsezivily izy mba hahafahanao mamafa mora foana ny rakitra iray ary mamoaka izay rehetra ilainao, tsy manoratra loatra.
- Mampiova avy hatrany ny antontan-taratasy mifototra amin'ny UTF-8 sy ny antontan-taratasy ao amin'ny Unicode. Midika izany fa tsy tokony hiahiahy momba ny kodia ianao raha nanondro ny codage na ny Supreme Beautiful afaka manova azy.
- BeautifulSoup dia heverina ho ambony noho ireo mpitsidika hafa malaza Python toy ny html5lib sy lxml. Izany dia ahafahana manandrana paikady fampitahorana samihafa. Ny tsy fitovian-tsoa amin'ity modile ity anefa dia ny famelomana azy bebe kokoa amin'ny fandaniam-potoana haingana.
Inona no ilainao hanangona vohikala amin'ny BeautifulSoup?
Hanomboka hiasa amin'ny BeautifulSoup, mila manana tontolo manodidina ny Python (na eo an-toerana na eo an-toerana ianao) napetraka ao amin'ny milina. Matetika i Python no ampiasaina ao OS X, fa raha mampiasa Windows ianao dia mila maka sy mametraka ilay fiteny amin'ny tranonkala ofisialy.
Tokony hanana ny Modely Beautiful sy fangatahana napetraka.
Farany, ilaina ny mahazatra sy mahasoa ny miasa miaraka amin'ny HTML marika sy ny rafitra dia ilaina tokoa satria hiasa miaraka amin'ny angona tranokala.
Ny fangatahana fangatahana sy ny tranokala mahafinaritra
Miaraka amina rafitra fandaharana Python tsara, dia afaka mamorona rakitra vaovao ianao (ampiasaina nyo, ohatra) miaraka amin'ny anarana tianao.
Ny tranombarotra Requests dia ahafahanao mampiasa HTTP amin'ny endrika Python amin'ny endrika malalaka azo vakiana, raha toa kosa ny BeautifulSoup dia mahazo ny haingon-trano vita haingana kokoa. Azonao ampiasaina ny fanambarana ampidirina mba hahazoana tranomboky roa.
Ahoana ny fanangonana sy famaritana pejy web
Ampiasao ireo fangatahana. Get
fomba hanangonana ny URL an'ny pejy web izay te-hanangonana rakitra. Avy eo, mamoròna tontolon'ny tarehy Beautiful oroka. Ity tetikasa ity dia mandray ny antontan-taratasy avy amin'ny Requests ho toy ny fanamafisany ary avy eo manaparitaka azy. Amin'ny alalàn'ny pejy nangonina, nozaraina sy napetraka ho tanjona BeautifulSoup, dia afaka manangona ireo angona ilainao ianao.
Ny famoahana ny lahatsoratra tadiavina ao amin'ny pejy web parsed
isaky ny te-hanangona angon-drakitra, mila mahafantatra ianao fa ny angon-drakitra nofaritan'ny Document Object Model (DOM) an'ny pejy Internet. Ao amin'ny tranonkalanao, tsindrio ny bokotra ankavanana (raha mampiasa Windows), na CTRL + click (raha mampiasa macOS) amin'ny iray amin'ireo zavatra entina ao anatin'ny angon-drakitra. Ohatra, raha tianao ny hisintona ny angona momba ny zom-pirenena mpianatra, tsindrio ny anaran'ny mpianatra iray. Misy ny sehatry ny tontolon'ny aterineto, ary ao anatin'izany dia hahita mombamomba ny zavatra mitovy amin'ny Inspect Element (ho an'ny Firefox) na ny Inspect (ho an'ny Chrome). Kitiho ny singa voatahiry ao amin'ny Inspect, ary hiseho eo amin'ny navigateur ny fitaovana fananganana Internet.
BeautifulSoup dia fitaovana tsotra fampiasana HTML izay manome fahafahana anao hanana fahafaha-manao zavatra be dia be rehefa mijery tranonkala . Rehefa mampiasa izany, aza adino ny mitandrina ny fitsipika ankapobeny toy ny fanamarinana ny volavolan-dalàna momba ny tranonkala; mijery ny tranonkala tsy tapaka ary manavao ny codeo araka ny fanovana natao tao amin'ilay tranonkala. Raha manana fahalalana momba ny tranokala mibaribary miaraka amin'i Python sy BeautifulSoup ianao, dia azonao atao mora foana ny mahazo ny tranonkala ilainao amin'ny tetikasa Source .